Home News Maxaadna Ogeeyn oo maanta ka Taagan Gaalkacyo
Maxaadna Ogeeyn oo maanta ka Taagan Gaalkacyo
wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa ku waramaya in xalay xaafad kamid ah Magaaladaasi lagu toogtay Axmed Deeq Cali Hayan Xisaabiyihii D/ Hoose ee Gaalkacyo.
Goobjoogayaal ayaa Warbaahinta u sheegay iney dilkaasi ka danbeeyen dhalinyaro ku hubeysanaa bastoolado, balse aysan garan karin heybtood, iyo halka ay aadeen kadib markii dilkaasi ay fuliyeen.
Kooxihi dilka geystay ayaa la sheegay iney isaga baxsadeen goobta kadib markii dilkaasi ay geysteen.
Saraakiisha ciidamad Amniga Puntland ayaa Simba u xaqiijiyay dilk xisaabiyihii dowladda hoose ee Gaalkacyo, kaasi oo kooxo hubeysan xalay ku dileen gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta G/Mudug.
Ilaa iminka waxaa jirin cid dusha u ridata mas’uuliyada dilka Xisaabiyihii Dowladda Hoose ee Gaalkacyo.
Dilalka inta badan ka dhaca deegaanada iyo degmooyinka Puntland ayaa waxaa sheegta dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab gaar ahaan kuwa ka howlgalada buuraha calmadoow iyo Goolis ee gobalka Bari.